admin, Author at — Page2of 244
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार ०३:४६ admin
काठमाडौं / बलिउड स्टार प्रभास अहिले तेस्रो हिन्दी फिल्म “राधेश्याम” लाई लिएर निकै चर्चामा छन् । यस फिल्ममा प्रभासले अभिनेत्री पूजा हेगडेसँग काम गरि रहेका छन् । काम गर्ने क्रममा प्रभास र पूजा बीच ख’टपट भएको छ । पूजाको व्यवहारका कारण प्रभास उनीसँग रिसाएका छन् ।भारतिय मिडियाका अनुसार अहिले यी दुईबीच खासै राम्रो सम्बन्ध नरहेको र बोलचाल पनि बन्द भएको बताइएको छ ।पूजाको व्य’वहार राम्रो नभएको र सुटिङमा पनि ढिलो आउने भएकाले प्रभास रिसाएका हुन् । फिल्मका निर्माताले भने मिडियासँग आफुहरुको सम्बन्धमा नराम्रो नभएको जवाफ दिएका छन् ।फिल्मलाई भूषण कुमारले…
कला / मनोरंजनLeaveacomment
११ आश्विन २०७८, सोमबार १२:३३ admin
एजेन्सी / संजय दत्तको बलिउड यात्रा जति उतार चढावले भरिपूर्ण रह्यो, उनको निजी जीवन पनि उस्तै रह्यो। कयौं दशक लामो बलिउड करियरमा संजय दत्त कयौं पटक विवादमा परे। साथै संजयको नाम विभिन्न अभिनेत्रीहरुसंग पनि जोडियो। अहिले सम्म तीन जनासंग विवाह गरिसकेका संजयका ३ सय ८ युवतीसंग प्रेम सम्बन्ध रहेको पनि बताउने गरिन्छ। कुनै एक समयमा संजय दत्त एक एयरहोस्टेससंग पनि प्रेम सम्बन्धमा थिए। चलचित्र ‘नाम’को शुटिंगका लागि फिलिपिन्स गएको समयमा संजयको ती एयरहोस्टेससंग भेट भएको थियो। बताइएअनुसार ती एयरहोस्टेसको नाम शा रहेको थियो। संजय दत्तको जीवनमा आधारित किताब ‘संजय दत्त:…
हलियुड / बलियुडLeaveacomment
यति क्युट अनि सुन्दर छिन कपिल शर्माकी छोरी – हेर्नुहोस (तस्बिरसहित )
११ आश्विन २०७८, सोमबार ११:५८ admin
एजेन्सी / विश्व भर अन्तराष्ट्रिय छोरी दिवस २०२१ मनाइदै गर्दा भारतीय कमेडियन कपिल शर्माले पनि अन्तराष्ट्रिय छोरी दिवसको शुभकामना दिएका छन्। कपिलले सामाजिक संजाल मार्फत छोरी दिवसको शुभकामना दिएका हुन्। छोरी दिवसको शुभकामना दिँदै कपिलले आफ्नी छोरी अनायराका तस्विर हरु पनि सार्वजनिक गरेका छन्। छोरी दिवसको शुभकामा दिनेक्रममा उनले एकसाथ छोरीका तीन तस्विर सार्वजनिक गरेका हुन्। कपिलले सार्वजनिक गरेको पहिलो तस्विरमा अनायराका पहेंलो घाँघरमा देखिएकी छन्। पहेंलो घंघरमा अनायरा धेरै नै क्युट देखिएकी छन्। त्यस्तै अर्को तस्विरमा सनग्लासमा पोज दिंदै गरेकी अनायरा धेरै क्युट देखिएकी छन्। तेस्रो तस्विरमा पनि अनायरा…
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०९:२४ admin
मुम्बई(एबीपी लाइभ)– बलिउड अभिनेता शाहरुख खान र गौरी खानलाई बलिउडको सुन्दर जोडीका रुपमा हेरिन्छ । शाहरुख मुस्लिम हुन् र उनकी पत्नी गौरी पञ्जाबी हुन् । उनीहरुको प्रेम विश्वका लागि एउटा उदाहरण बनेको छ । शाहरुख सन् १९८८ मा पहिलोपटक गौरीसँग भेट हुँदा उनको प्रेममा परे । शाहरुख गौरीप्रति कति आशक्त थिए भने गौरीकै लागि उनले पत्रकारमाथि तर’बार बोकेर जाइलागे । शाहरुखले सन् १९९१ अक्टोबर २५ मा गौरीसँग विवाह गरेका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नो करियर बनाउनका लागि मुम्बई आए । सन् २०१३ मा शाहरुखले तहलका थिंकको एक कार्यक्रममा विवाहको समयका…
एजेन्सीLeaveacomment
सुटिङ सेटमा फर्किइन साम्राज्ञी, सेयर गरिन् यस्ता तस्बिर (तस्बिर सहित)
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०८:४१ admin
काठमाण्डौं । गतबर्ष चलचित्र ‘तिम्रो मेरो साथ’को छायांकन सकेपछि नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले नयाँ चलचित्रको काम गरेकी छैनन् । उनको लाइनअपमा केही चलचित्र भने छन् । वैशाखबाट दोश्रो चरणको कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा भएपछि नेपाली चलचित्रको काम ठप्प भयो । तर, म्युजिक भिडियोको छायांकनको गती भने रोकिएको थिएन । भिडियोको छायांकनमा कलाकारहरु व्यस्त हुँदा साम्राज्ञी भने यसबाट टाढै रहिन् । उनै, साम्राज्ञी सुटिङ सेटमा फर्किएकी छिन् । तर, यसपटक उनी चलचित्रको नभएर म्युजिक भिडियोको सेटमा फर्किएकी हुन् । ट्री इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गरिरहेको एक गीतको भिडियोमा दर्शकले साम्राज्ञीलाई देख्न पाउनेछन् । अस्मिता…
आलिया र रणबीर विवाहका गर्नका लागि जोधपुर पुगेका हुन् त ?
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०७:२० admin
मुम्बई/ बलिउडका चर्चित अभिनेता रणबीर कपूर तथा अभिनेत्री आलिया भट्ट बलिउडका लोकप्रिय जोडी मध्येका एक हुन् । लामो समयदेखि दुबैको विवाह हुने खबर चर्चामा रहेको छ । पछिल्लो समय फेरी एकपटक आलिया र रणबीरको विवाह हुने चर्चा चलेको छ । भखर्रै रणबीर र आलियालाई जोधपुरमा देखिएको छ ।जोधपुर घुम्दै गरेको दुबैको तस्विरले विवाहको भेन्यु हेर्न गएको प्रशंसकहरुको अनुमान गरेका छन् । रणबीर कपूरले सेप्टेम्बर २८ का दिन अर्थात भोलि मंगलबार आफ्नो ३९ औं जन्मदिन मनाउँदै छन् ।यस्तो स्थितिमा जन्मदिनको २ दिन अगाडि जोधपुर पुग्नुले केही विषेश समारोह हुन लागेकोतिर संकेत…
अस्ट्रेलियामा अध्यनरत नेपाली बिद्यार्थी लामाद्वारा सकेको सहयोग गरी जीवन बचाईदिनु हुन अनुरोध
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०४:१६ admin
अस्ट्रेलियाको साउथ अस्ट्रेलिया बिश्वबिद्यालयमा अध्यनरत नेपाली बिद्यार्थी पदमा लामा एक होनहार बिद्यार्थी हुनु हुन्छ । बाल्यकाल देखि नै अध्ययनमा रुचि राख्ने र पढेर ठुलो मानिस बनेर समाजको लागि केहि गर्नु पर्छ भन्ने सोच लिनु भएका लामा को स्थायी बसोवास भने चितवनमा रहेको छ । हाल अस्ट्रेलियाको एडेलिडमा बस्दै आउनु भएका लामा बिगत केहि समय देखि रेनल फेलर बाट पिडित हुनु हुन्छ, उहाले डायोगोनोसीस गरेपछि केहि समय मेडिकेसन गरी उपचार गर्नु भएको थियो । तर उक्त उपचार पश्चात एक्कासी स्वस्थ अवस्था बिग्रदै जादा डाक्टरको सल्लाह बमोजिम मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने भएको…
अष्ट्रेलियाLeaveacomment
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०४:०३ admin
११ असोज २०७८, काठमाडौँ/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६० रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ ।यसैगरी युरो एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले…
बैंक / वित्तीयLeaveacomment
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०३:२२ admin
काठमाडौँ, ११ असोज । पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र अभिनेत्री मनिषा कोइरालाबीच रमाइलो भेटघाट भएको छ । उनीहरुबीच अस्ति (शनिबार) रात्रीकालिन समयमा भेटघाट भएको हो । मनिषा कोइरालाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै पूर्व युवराज्ञी हिमानीलगायत अन्य महिलाहरुसँग विशेष समय बिताएका लेखेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्,‘बलियो महिलाहरुसँग बिताएको समय मेरो लागि हिजो रातीको रमाइलो पल थियो…… ‘विश्वलाई बलियो महिलाको आवश्यक छ । जसले अरुलाई अगाडी बढ्न र अरुलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । जसले अरुलाई माया गर्न सक्छ र अरुबाट माया पाउन सक्छ । महिला जो…
चर्चित गाएक दुर्गेश थापाले गीत गाएरै किने काठमाडौंमा घर र गाडी ….
११ आश्विन २०७८, सोमबार ०२:२९ admin
काठमाडौं / चर्चित गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले कला कारिता बाटै राम्रो प्रगति गरेका छन् । उनले आफ्नो कलाकारितामा आफ्नो मिहिनेतले घर र कार किन्न सफल भएका हुन् । हालै उनले काठमाडौंको धर्म स्थलीमा महँगो मूल्यमा एक नयाँ घर किनेका हुन् । आफुले नयाँ घर किनेको बारे मोडल थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नो नयाँ घरको तस्बिर शेयर पनि गरेका छन् । तस्बिर हेर्दा उनले शान्त स्थानमा घर किनेको देखिन्छ । उनले आफ्नो छोरा ८ महिना पुगेको अवसरमा घर किनेको बताएका छन् ।उनले लेखेका छन् – ‘मेरो…